Ugu yaraan 31 qof oo ku dhimatay shil tareen oo ka dhacay gobolka Semnan ee waqooyiga dalka Iran - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUgu yaraan 31 qof oo ku dhimatay shil tareen oo ka dhacay gobolka Semnan ee waqooyiga dalka Iran
November 25, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Ugu yaraan 31 qof oo ku dhimatay shil tareen oo ka dhacay gobolka Semnan ee waqooyiga dalka Iran. [Sawirka: EPA]
Tehran-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 31 qof ayaa ku dhimatay tobonaan kalena waa ay ku dhaawacmeen shil tareen oo ka dhacay gobolka Semnan ee waqooyiga Iran, sida uu sheegay sargaal.
Shilka ayaa ka dhacay gelinkii hore ee Jimcada deegaanka subzero temperatures oo 250km dhanka bariga kaga beegan caasimada dalka Iran ee Tehran.
“Ilaa iyo hadda 31 qof ayaa dhimatay in ka badan 70 kalena waxaa la dhigay isbitaal,” sidaa waxaa warbaahinta maxaliga ah u sheegay Mohammad Reza Khabbaz oo ah guddoomiye gobol.
Cilad dhanka farsamada ah ayaa keentay shilka, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka.
February 6, 2017 Ruushka: Iran maahan dowlad argagixiso
November 24, 2016 Ku dhawaad 80 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada Baqdaad ee Ciraaq
June 14, 2017 Qatar oo kala baxaysa ciidamadeeda xadka u dhaxeeya Jabuuti iyo Eriteeriya
December 13, 2016 Iran oo wacad ku martay in ay burburin doonto Yuhuuda haddii Donald Trump uu daandaansado heshiiskooda nukleerka